Vaovao - Nahazo an'i Allen Bradley i Rockwell International
Rockwell dia manoritra fa i Rockwell, izay manana foibe any Milwaukee, Wisconsin, dia orinasa multinasional automatique automatique efa an-taonany maro. Ny fivoaran'ny orinasa amin'ny fifaninanana lozabe toy izany dia nahitana vokatra lehibe toy izany, izay manaporofo ny tanjaka matanjaka, ny fahavelomana ary ny fahaizany mandinika tsara ny tsena, ny fahaiza-mampifanaraka ary ny kolontsaina orinasa lalina.
Tantara fohy momba ny fampandrosoana
Tamin'ny voalohany, tamin'ny 1903, Lynde Bradley sy Dr. Stanton Allen dia nampiasa ny famatsiam-bola voalohany $ 1.000 hananganana ny Compression Rheostat Company. Tamin'ny 1904, ny maso voalohany an'ny crane miaraka amin'ny marika Allen-Bradley dia natolotra ny fampirantiana St. Louis tamin'ny 1904 mba handray anjara amin'ny fampisehoana, ary nivoaka ny vokatra ofisialy Rockwell. Tamin'ny 1909, nanova ny anarany tamin'ny fomba ofisialy ho Allen-Bradley Corporation ilay orinasa ary nifindra tany Milwaukee. Dr. Allen no filoha, Lynde Bradley kosa no filoha lefitra sy lehiben'ny fitantanam-bola, ary Bradley koa dia sekretera jeneraly sy tale jeneraly. Raha vao nanangana biraon'ny varotra tany New York i Allen-Bradley, ary nisy vokatra vaovao matanjaka kokoa natomboka, dia nitombo isan-taona ny varotra an'ny orinasa, indrindra ny rheostat "bradleystat" ampiasaina amin'ny takelaka fanaraha-maso ny fiara sy ny tontolon'ny radio. Ny fiderana sy ny varotra mafana dia nitana andraikitra lehibe ho an'ny orinasa.
1903: Tamin'ny 12 desambra, Linde-Bradley sy Stanton Allen dia nanangana ny Compression Varistor Company ary nanomboka namokatra vokatra AB. Tamin'ny 1909 dia nantsoina hoe Allen Bradley Company izy.
1904: Ny mpanara-maso crane voalohany (karazana mpanera A-10) napetraka tamin'ny famokarana betsaka dia nalefa tany amin'ny St. Louis World Expo mba handray anjara. Taorian'izay dia nahazo ny kaomandy lehibe voalohany ho an'ny -13 crane-controleur ny orinasa, mitentina $ 1.000.
1917: Allen-Bradley dia manana mpiasa 150 ary ny tsipika famokarana dia misy starter sy switch automatique, breakers circuit, relay ary fitaovana elektrika hafa. Ny baikon'ny governemanta nandritra ny Ady Lehibe Voalohany dia nitondra avo hatrany amin'ny avo ny varotra an'ny orinasa.
1918: Julia Bolinsky no lasa mpiasa vehivavy voalohany tao amin'ny orinasa Allen Bradley.
1920: Tamin'ny 11 Aogositra, natao tao Milwaukee ny kaonferansa fivarotana AB voalohany. Tamin'ny 14 Aogositra, ny hetsika mpiasa voalohany nokarakarain'ny orinasa dia natao tao Milwaukee Grant Park.
1924: Ny mariky ny octagonal dia lasa mari-pamantarana an'ny orinasa. Taty aoriana, ny sary kalitao dia voasokitra tamin'ny sary famantarana. Ny fifantohana amin'ny kalitao dia lasa ADN efa an-taonany maro an'ny orinasa.
1932: Ny famoizam-po manerantany dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny orinasa. Mba hanamaivanana ny krizy dia nanangana tetikasa manokana ny orinasa hanonerana ny mpiasa amin'ny karama very amin'ny tahiry. Herintaona no nanatanterahana ity tetikasa ity. Tamin'ny farany, Alan Bradley dia nividy ny anjara rehetra tamin'ny zanabola 6%.
Tamin'ny 1937: Ny hetsika R&D izay niseho tamin'ny fiandohan'ny taona 1930 dia namokatra teknolojia sy vokatra marobe, ny tena zava-dehibe dia ny starter coil spiral izay niseho tamin'ny 1934 sy ny resistor thermoplastic izay niseho tamin'ny 1935. Tamin'ny 1937, ny isan'ny mpiasa an'i Allen Bradley dia nahatratra ny haavo talohan'ny resa-be ary nahatratra 4 tapitrisa dolara ny varotra.
Tamin'ny 1943: Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny mpiasan'ny orinasa dia nanohana tamim-pahavitrihana ny ady fanoherana ny fasista, niseho ny hetsika fanomezana an-tsitrapo an-tsitrapo voalohany an'ny orinasa, ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fiovan'ny Vokovoko Mena sy ny miaramila vehivavy.
1954: Ny ekipa Allen Bradley sy ny antoko mpihira dia nitombo haingana tao anaty vondrona mpanakanto matihanina. Ankoatry ny repertoires toy ny kaonseritra fisakafoanana ao amin'ny foiben'ny Milwaukee, ny orkesitra dia manao fampisehoana ihany koa ho an'ny orinasa sy vondrom-piarahamonina maro. Tamin'ny 1954, niaraka tamin'ny fanohanan'ny filoham-pirenena Fred Loock tamin'izany fotoana izany, ny orkesitra dia nanomboka ny fitsidihany voalohany tamim-pirahalahiana tany Etazonia sy Kanada. Fampisehoana 12 toy izany no notontosaina.
1962: Tamin'ny 31 Oktobra, Harry Bradley dia nanindry ny switch tamin'ny famantaranandro ambony an'ny Allen Bradley Building eo am-panamboarana.
1964: Ny trano malaza Allen Bradley dia vita ary nanjary birao sy ivon-pikarohana vaovao an'ny orinasa.
1969: Allen Bradley dia nanitatra ny fahafahan'ny famokarana tany ivelan'i Amerika Avaratra, ary ny toby famokarana eropeana voalohany, Allen Bradley UK Ltd., dia vita tao Bletchley, Angletera (lasa Milton Keynes taty aoriana).
1972: Tamin'ny 3 martsa, nanomboka nirotsaka tamin'ny orinasa inverter tamin'ny alàlan'ny fahazoana azy i Allen-Bradley.
tamin'ny 1980: Nandalo iraisam-pirenena i Allen Bradley. Tamin'ny taona 1985, ny varotra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia nitentina 20% amin'ny vola miditra amin'ny orinasa.
1985: Nahazo an'i Allen Bradley ny Rockwell International.
1988: Rockwell Automation dia nanangana orinasa voalohany tany Sina, Allen Bradley (Xiamen) Co., Ltd.
ny taona 1995
Rockwell International dia mahazo orinasa Ryan Electric. Ny fitambaran'i Allen Bradley sy Ryan Electric dia mahatonga ny Rockwell Automation vao natsangana ho orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny automatisation factory. Nahazo ny departemanta rindrambaiko automatique an'ny ICOM ihany koa ny orinasa ary nanangana Rockwell Software.
Taona 1999: Ny tanàna nahaterahan'i Allen Bradley tany Milwaukee, Wisconsin, dia nanjary foiben'ny Rockwell International.
Taona 2001: Rockwell International Inc. nisaraka tamin'i Rockwell Collins ary nanova ny anarany ho Rockwell Automation. Izy io dia tohanan'ny marika malaza eran'izao tontolo izao-Allen Bradley, Ryan Electric, Dodge ary Rockwell Software ho orinasam-panjakana mahaleo tena.
Taona 2003: Rockwell Automation, izay manana sampana mihoatra ny 450 any amin'ny firenena mihoatra ny 80 eran'izao tontolo izao, dia hanohy hanao ezaka tsy manam-petra mba ho lasa mpamatsy vola, fifehezana ary vahaolana ho an'ny mpanjifa sarobidy indrindra.
taona 2004: Ny firoboroboan'ny orinasa Rockwell Automation tamin'ny taona 2004 dia nampiseho fitomboana roa sosona, manamarika fa amin'ny maha-manam-pahaizana amin'ny indostria automatique an'izao tontolo izao azy, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny tsenan'ny indostria Sina.
-Niorina ny sampana Nanjing sy Qingdao
-Nitsidika an'i Sina voalohany tamin'ny maha CEO azy i Keith Northbush
-Ny fitomboan'ny orinasa mitohy amin'ny isa 2
-Mamoaka sary marika vaovao ara-bakiteny: "Mihainoa. Mieritrereta. Hamaha ”(Mihainoa, tiavo ary miasa mafy)
-Ny fananganana sampana any Chengdu, tanàna lehibe any atsimo andrefana, dia midika famatsiam-bola mitohy any Shina ary hetsika hanokana ny tenany ho amin'ny fampandrosoana an'i Southwest China.
-Niorina ny sampana Zhengzhou
-Niorina ny sampana Harbin
-Mihoatra ny mpiasa 1000 any Chine
-Ny fananganana foibe manerantany ho an'ny orinasan-tsolika fanaraha-maso indostrialy any Shanghai, manamarika ny paikadin'ny tsena mifantoka amin'ny mpanjifa
-Mr. Ou Ruitao dia talen'ny tale jeneralin'i Sina, nitarika ny ekipa sinoa hampiroborobo ny fitomboan'ny sinoa
-Niorina ny biraon'ny sampana any Hangzhou, Jinan, ary Tianjin
-Rockwell Automation Control Integration (Shanghai) Co., Ltd. nisokatra
-Rockwell Automation dia nanangana orinasam-pivarotana sy fandidiana 25 any Shina (ao anatin'izany i Hong Kong sy Taiwan), ary ekipa maherin'ny 1.500 no manompo eo amin'ny tsena sinoa.
-Niorina tamin'ny fomba ofisialy ny -Rockwell Automation (China) Co., Ltd.